လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပါတီ (၃၁)ဖွဲ့၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာများ Blue Mark ရရှိ၊ ကျန်ပါတီများ ဆက်လက် အတည်ပြုဆဲဖြစ် ~ Myanmar Online News
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပါတီ (၃၁)ဖွဲ့၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာများ Blue Mark ရရှိ၊ ကျန်ပါတီများ ဆက်လက် အတည်ပြုဆဲဖြစ်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအကြို မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၁ ဖွဲ့၏ လူမှုကွန်ရက် (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်) စာမျက်နှာများကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီမှ အပြာ‌ရောင်အမှန်ခြစ် အမှတ်အသား (Blue Mark) ဖြင့် အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကတည်းက ရရှိထားပြီးဖြစ်သော နိုင်ငံရေးပါတီများကိုပါ ထည့်သွင်းရေတွက်လျှင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများကို အတည်ပြုထားသော နိုင်ငံရေးပါတီ စုစုပေါင်း (၃၆) ဖွဲ့ ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပါတီများနှင့် ဒီမိုက‌ရေစီဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်အင်စတီကျူ့ (DIPD) က နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင် လူမှုကွန်ရက်အား ထိရောက်စွာနှင့် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ နှစ်ရပ်၏ နောက်ဆက်တွဲဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများကို ဆက်လက်အတည်ပြုနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်နေသော ရှေ့သို့မြန်မာစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီအိုင်ပီဒီက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီ၊ အိုင်အာအိုင်အဖွဲ့(IRI) တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် အမုန်းစကားများနှင့် သတင်းမှား၊ သတင်းတုများ ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ပါတီများ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများကို အတည်ပြုပေးလိုက်ခြင်းကြောင့် ယင်းတို့၏ မဲဆန္ဒရှင်များနှင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ထိတွေ့ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ Blue Mark ရရှိထားပြီးသော နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်းကို အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အခြားကျန်ရှိသည့် ပါတီများကိုလည်း အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ပါတီတာဝန်ရှိသူများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်ထောက်ခံအားပေးသည့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ရပ်၏ စာမျက်နှာအား ရှာဖွေပြီး Blue Mark ရရှိထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ပြန်လည်ဝေမျှကြည့်ရအောင်လားခင်ဗျာ။
31 political parties Facebook pages verified, others remained to be verified
In preparation for their campaigning for the 2020 Myanmar elections, 31 political parties have received blue badge on their Facebook page which were verified by the company. Now, there areatotal of 36 political parties which have been verified on Facebook. The process isafollow-up action of the two workshops which is under DIPD’s program of enhancing capacity of the political parties on effective and responsible use of social media in political campaign.
The process of political party page verification has been ongoing and facilitated by DIPD Myanmar in coordination with Facebook company and IRI as part of its engagement under STEP Democracy project funded by the European Union. The objective of this important action is to confront the dissemination of misinformation and hate speech on social media in Myanmar especially in election period. And, it would help the parties to get easily engaged with their right voters.
Below you will see the list of political party pages that have been verified. The process is still ongoing and there are many party pages remained to be verified. Please go see the page ofapolitical party which you support and share with us if it is verified or not.
STEP Democracy - ရှေ့သို့မြန်မာ
Crd : Danish Institute for Parties and Democracy - DIPD Myanmar #Myanmar_Online_News